အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်လျက် သွင်းကုန်လျော့ချနိုင်မည့် ကုန်စည်အမယ်များ ဖော်ထုတ်MyanTrade
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်လျက် သွင်းကုန်လျော့ချနိုင်မည့် ကုန်စည်အမယ်များ ဖော်ထုတ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်လျက် သွင်းကုန်လျော့ချနိုင်မည့် ကုန်စည်အမယ်များ ဖော်ထုတ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းရမှုကို လျော့ချနိုင်မည့် ဦးစားပေးကုန်စည် ၁၀၂ ခုအား ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနက ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိကာလတွင် အိန္ဒိယပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရန် အလားအလာကောင်းမွန်မှုရှိသော ကုန်စည်အမယ်များအား တင်သွင်းမှုမှာ တိုးတက်မြင့်မားလျက်ရှိရာ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများအတွင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက် အဆိုပါ ကုန်စည် ၁၀၂ ခု၏ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အကောက်ခွန်လိုင်း HS code 8-digit အဆင့်ရှိ အဆိုပါကုန်စည်စာရင်းကို အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် သတင်းနည်းပညာ၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည်၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆေးဝါးနှင့် ဓာတုပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ သတ္တုတူးဖော်မှု စသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင် သော အစိုးရဌာနများအပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန ၁၅ ခုထံသို့ မျှဝေလျက် ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးနည်းလမ်းများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း ဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းအရင်းအမြစ်များအား ကိုးကားလျက် Economic Times သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါသည်။
အိန္ဒိယ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှာ ကာလတိုအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ဩဂုတ်လအတွင်း ပျမ်းမျှတင်သွင်းမှုတန်ဖိုး ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ နှင့် အထက်ရှိသော ကုန်စည်များ၊ ကာလလတ် ၃ နှစ်အဖြစ် ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း၊ ကာလရှည်တွင် ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိလည်းကောင်း နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှတင်သွင်းမှုတန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံနှင့် အထက်ရှိသော ကုန်စည်များကို ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ဩဂုတ်လအတွင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုးစုစုပေါင်း၌ အဆိုပါ ဦးစားပေးကုန်စည် ၁၀၂ ခု၏ တင်သွင်းမှုတန်ဖိုးမှာ ၅၇.၆၆% ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရွှေ၊ စားအုန်းဆီကြမ်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ် ပေါင်းစည်းဆားကစ်၊ တစ်ကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပြူတာ၊ ယူရီးယားမြေဩဇာ၊ သံမဏိပစ္စည်း၊ သန့်စင်ပြီးကြေးနီ၊ ကင်မရာ၊ ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်စက်ကိရိယာ၊ နေကြာဆီနှင့် ဖော့စဖောရစ်အက်ဆစ် စသည်တို့အပါအဝင် ကုန်စည် ၁၈ မျိုးသည် တန်ဖိုးအရ ပါဝင်မှုအများဆုံးနှင့် တင်သွင်းသည့်် တိုးတက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ ပထမ ၇ လအတွင်း ကုန်စည်တင်သွင်းမှုမှာ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃၁.၂၉ ဘီလီယံရှိပြီး ယခင်နှစ် တူညီသည့်ကာလ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁၈၅.၃၈ ဘီလီယံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၇၈.၇၁% ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူ ကုန်စည်တင်သွင်းမှုတန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၂၈၆.၀၇ ဘီလီယံထက်လည်း ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ သွင်းကုန်အပေါ် အမှီပြုနေရမှုကို လျော့ချနိုင်ရေး လက်ငင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်မည့် အစီအမံများကို အိန္ဒိယအစိုးရက တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Source: 1. Commerce ministry shares list of 102 items to ministries for enhancing domestic capacity to cut imports, 10-11-2021, Economic Times
2. Govt looks to cut imports of 100+ 'priority' items, 11-11-2021, Economic Times
တရုတ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ဝက်အရှင်ဈေးနှုန်း ပြန်လည်မြင့်တက်လာ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်၌ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုသည် ကပ်ရောဂါမတိုင်မီ...